Kukwereta Mari Kubva Kumhuri-Funga Kaviri Kaviri - TMC App
Kukwereta Mari Kubva Kumhuri-Funga Kaviri Kaviri
Kukwereta Mari Kubva Kumhuri kunogona kuve sangano rakaoma kutaura zvishoma. Kana iwe ukawana mari kubva kubhengi, uye iwe usingakwanise kubhadhara yako ivo vanongokutevera iwe rubatso. Chii chinoitika kana ukakweretesa mari kunhengo yemhuri uye ivo vasingakwanise kukubhadhara? Uri kuenda kunotora mota yavo here? Zviri pachena kuti kwete. Izvi ndizvo zvinoita kuti kupa mari kunhengo yemhuri kuve kwakaoma.
Kana iwe uri kuronga kupa mari kune chero nhengo dzemhuri, iwe unofanirwa kunge wakagadzirira kutaura zvakanaka kune iyo mari zvachose. Mumamiriro ezvinhu mazhinji mikana yekuti iwe ubhadharwe ishoma, saka unofanirwa kujairana nazvo. Tichifunga kuti kupa mari kunhengo yemhuri kunogona kuve kwakaoma, kune mamwe mazano ekubatsira kuti zvive nyore.
1: Usambopa mari yaunoda kana yaunoda. Kana iwe pachako uri pabhajeti rakasimba haugone kubhadhara kuti uende kunopa mari kushamwari nemhuri. Zvinogona kuita sezvine hukasha asi iwe unofanirwa kutanga wauya, kana ukaenda wakaputsika ndiani achakubatsira? Sezvandatsanangura pamusoro, chero mari yaunopa iwe unofanirwa kugadzirira kuti usazodzoka. Saka kana iwe usina mari yekusiya, saka haugone kupa chero.
Kana mumwe munhu achikwereta Mari kubva kuMhuri ivo vanokuzivisa iwe kuti vachakubhadhara iwe. Mamiriro ese ezvinhu akasiyana, asi kana iyo nhengo yemhuri ine nhoroondo yekusabhadhara zvikwereti kana kusava nehanya nemari yavo, nei iwe uchiipa?
2: Usambofa wakasaina pane zvikwereti. Mumamiriro ezvinhu chaiwo nhengo yemhuri inogona kuda munhu anosaina pamwe chete nechikwereti. Bhangi rinogona kusada mamiriro avo zvakakwana kuti rivape vega kunze kwekunge vawana mumwe munhu kuti avasaine, uye kuti vazotendeukira kwauri. Zvinokurudzirwa kuti usaite kusaina pazvikwereti. Zvinokuisa panjodzi yekuzodzosera mari yacho kana mumwe munhu akatadza kubhadhara, mari yaungave usina.
3: Ipa mari zviri nyore sezvipo. Kana vanhu vari Kukwereta Mari Kubva Kumhuri, zvinoita senge inopesana nekugadzira sezvo kusvika parizvino ndanga ndichitaura kungwarira. Ndicho chinhu chatinokanganwa patinenge tichikura. Kana isu tiri vechidiki tinowanzo kuwana mari sezvipo, zvisinei isu hatiide. Hapana achatipa isu kana takura uye tichida mari yacho.
Ipa vana vako vakuru uye nhengo dzemhuri mari yemazuva ekuzvarwa kana mazororo, kana uchikwanisa. Kwete chete inogona kuvabatsira kunze, asi zvakare inokupa iwe imwe yekuwedzera inoda kuti iwe umbomanikidzwa kuvanyima chikwereti. Iyo inozopedzisira yabatsira iwe nemhuri yako.
Kana uri kugadzirira kupa mari kune chero nhengo dzemhuri, iwe unofanirwa kunge wakagadzirira kuti wabye-bye kune iyo mari zvachose. Kana iwe pachako uri pachirongwa chekushandisa chakasimba haugone kubhadhara kuti uende kunopa mari kushamwari nemhuri. Mamiriro ezvinhu ega ega akasiyana, asi kana nhengo yemumba iyoyo ine nhoroondo yekusabhadhara zvikwereti kana kusava nehanya nemari yavo, sei uchiipa? Zvinokuisa panjodzi yekuzodzosera mari yacho kana mumwe munhu akatadza kubhadhara, mari yaungave usina.
Ipa vana vako vakuru uye nhengo dzemhuri mari yezororo kana mazuva ekuzvarwa, kana uchikwanisa.